Yintoni i nyaniso? Iingcamango zeNyaniso
Inkolelo yokuBambisana yeNyaniso mhlawumbi yesibini okanye yesithathu ekuthandeni kwiNkcazelo yeeNcwadi. Ekuqaleni kuphuhliswe nguHegel noSpinoza, kubonakala ngathi yinkcazelo echanekileyo yendlela indlela esiyiyo yokusebenza ngayo inyaniso isebenza ngayo. Kulula nje: inkolelo yinyaniso xa sikwazi ukuyihlanganisa ngendlela ehlelekile neyengqiqo kwiinkqubo ezinkulu kunye eziyinkimbinkimbi zeenkolelo.
Ngamanye amaxesha oku kubonakala ngathi kuyindlela engaqondakaliyo yokuchaza inyaniso-emva koko, inkolelo inokuba yinkcazelo engalungile yinyani kwaye ihambelane nenkqubo enkulu, eyinkimbinkimbi yeenkcazelo ezingenakunyani.
Ngokutsho kweNkcazo yokuBambisana kweNyaniso, loo nkolelo engalunganga iya kuthiwa "inyaniso." Ngaba oko kunokwenene na?
Inyaniso kunye neNyaniso
Kuya kunceda ukuqonda iifilosofi zalabo abachasayo le ngqungquthela - khumbula, ukukhulelwa komntu kwenyaniso kubandakanyeka kakhulu kunye nokukhulelwa kwabo ngokoqobo. Kwabaninzi beengcali zefilosofi abachasayo ekukhuseleni iNkcazo yokuBambisana, baye baqonda "Inyaniso Eyona nto" njengento yonke eyinyaniso. Ukuze i-Spinoza, inyaniso eyona nto yinyani eyona nto iphela yenkqubo eyalwe ngumbono onguThixo. KuHegel, inyaniso yinkqubo ehlanganisiweyo yokudibanisa kuyo yonke into equlethwe kuyo.
Ngaloo ndlela, ukwenzela iiproferensi zokwakha iprogram njengeSpinoza noHegel, inyaniso ayinakutshatyalaliswa ngokwenene kwizinto eziyinyani, kodwa baqonda into enjengoko ichazwe kwinkqubo epheleleyo. Ngaloo ndlela, ukuba ingxelo iyinyani, kufuneka ibe yinto enye inokudibaniswa kule nkqubo - kungekhona nayiphi na inkqubo, kodwa inkqubo leyo inikeza inkcazelo ebanzi ngayo yonke inyaniso.
Ngamanye amaxesha, kuthethwa ukuba akukho nkcazo ingaziwa njengenyaniso ngaphandle kokuba siyazi ukuba ihambelana nazo zonke ezinye izitatimenti kwinkqubo - kwaye ukuba loo nkqubo kufuneka ukuba iqulethe zonke iinkcazo zinyani, oko ke isigqibo kukuba akukho nto yaziwa ukuba yinyani okanye yinyani.
Inyaniso kunye nokuqinisekiswa
Abanye baye bavikela inguqu ye-Coherence Theory echaza ukuba iingxelo zinyani zizo ziqinisekiswe ngokwaneleyo.
Ngoku, oku kungase kuqale kuvelise ngathi kufanele ibe nguqulelo lweNkcazelo yeNcwadi-emva kwayo yonke into, uyayifaka njani ingxelo ngokuchasene nokuba akunjalo ukuze ubone ukuba ihambelana nenyaniso?
Isizathu kukuba akusiwo wonke umntu owamkelayo ukuba iingxelo zingqinisiswa ngokwahlukileyo. Nanini na xa uvavanya ingcamango, uvavanya uvavanyo lweqela leembono ngexesha elifanayo. Umzekelo, xa uthabatha ibhola esandleni sakho kwaye uyayiphonsa, ayikho nje inkolelo yethu malunga nodlavanyo ovivinywayo kodwa kunye neenkolelo zethu malunga nezinye izinto ezininzi, kungekhona ubuncinane bokubakho ukuchaneka kwezinto zethu ezibonakalayo ngcamango.
Ngoko ke, ukuba iingxelo zivavanywa nje njengenxalenye yamaqela amakhulu, ngoko umntu unokugqiba ukuba isitatimenti sinokuthiwa "siyinyaniso" kungekhona kakhulu kuba ingaqinisekiswa ngokunyaniseka kodwa kunokuba ingabandakanywa kwiqela leengcamango ezinzima kwaye banokuqinisekiswa ngokuchasene nenyaniso. Le nguqu ye-Coherence Theory inokufumaneka rhoqo kwiinkalo zenzululwazi apho iingcamango malunga nokuqinisekiswa nokudibanisa iingcamango ezintsha kwiinkqubo ezizinzileyo zenzeka rhoqo.
UkuBambisana kunye neNxibelelwano
Naluphi na uhlobo olubanjwayo, kufuneka kucacise ukuba iNkcazo yokuBambisana yeNyaniso ayikho kude neNcwadi yeNcwadi yeNyaniso .
Isizathu kukuba nangona iingxelo zomntu ngamnye zinokugwetywa njengezobuxoki okanye ezisekweni ekusetyenzisweni kwazo kunye nenkqubo enkulu, kucingwa ukuba le nkqubo yinto ehambelana ngokuchanekileyo nenyaniso.
Ngenxa yoko, iNkcazo yokuBambisana iyakwazi ukuthatha into ebalulekileyo malunga nendlela esicinga ngayo inyaniso kwimpilo yethu yemihla ngemihla. Akuyinto engavamile ukugxotha into ethile ngokungathethekiyo ngokufanelekileyo ngenxa yokuba ihluleka ukuhambelana nenkqubo yeengcamango esithembekileyo. Kuyavunywa, mhlawumbi inkqubo esicinga ukuba yinyani yizona ndlela ezikuye kumakishi, kodwa ngokude ziqhubeka ziphumelele kwaye zinako ukwenza utshintsho oluncinane ekukhanyeni kwedatha entsha, ukuzithemba kwethu kuqikelele.
I-Topspin Ekhonzayo: Indlela yokwenza i-Volleyball isebenze nge-Top Spin
I-Top 10 ye-Party ecocekileyo yengoma yabantwana
Iimpendulo Zemibuzo Yabasetyhini YamaKristu Ngomhla Wokudlwengula
Izinto ezili-13 zokuPhatha iziCwangciso kufuneka zikwazi
I-Top 9 yeeNgoma zeeNgoma